श्रीमानसंग लुकेरै जन्माईन् श्रीमतीले ३ बच्चा, श्रीमानले खोज्दै छन् ति छोराछोरीका बुवा ! – Wow Sansar
काठमाडौं । जब आफूले जन्माएका बच्चाहरुको बुवा नभएको बताइएपछि अचम्म मान्नु स्वभाविक नै हो । त्यतिबेला सबैको कुडिन्छ, रिस उठ्छ । यो बिषय ब्रिटेनको हो । ती व्यक्ति सफल व्यवसायी हुन् । ती मानिस अहिले तीन बच्चाको बुवा हुन् ।जसमा दुई बच्चाको उमेर अहिले १९ वर्ष छ । एकको उमेर २३ वर्ष पुगेको छ । २०१६ सालमा डाक्टरसँग जाँच गराउन पुगेका ती व्यवसायीले आफू बच्चाको बुवा बन्न नसक्ने थाहा पाएपछि अचम्ममा परेका छन् ।
उनले प्रहरी कहाँ निवेदन समेत दर्ता गराएका छन् । रिर्चडको जीन्दगीमा एकैछिनमा उतारचढाव आएको छ । उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भए । मुद्धा जितेर उनले २ लाख ५० हजार पाउण्ड पाएका छन् । उनले बच्चाको बुवा को रहेछ भन्ने पत्ता लगाउन चाहेका छन् । तर अदालतले ती व्यक्तिलाई गोप्य राख्न मिल्ने आदेश दिएको छ । श्रीमतीको यो चाल थाहा पाएपछि उनी चकित परेका छन् ।
रिचर्डले भनेका छन्,‘ जब मैले टेस्ट रिपोर्टमा लेखेको पढेँ त्यतिबेला म आकाशबाट खसेजस्तै भएँ । कुनैपनि पुरुष यो बिरामीबाट ग्रसित छ भने बुवा बन्न सक्दैन । डाक्टरलाई समेत उनले पुनः सोधे यो रिपोर्ट झुटा हो तर डाक्टरले रिर्पोट सही भएको बताए ।’ उनी आफ्ना बच्चाहरुको दैनिक क्रियाकलापमा ध्यान दिन्छन् त्यहाँ को आउँछ, के गर्छ खास बुवा को हो ? आदि । उनकी श्रीमतीले पनि यो बिषयमा बोल्न चाहिनन् ।
Prevअचम्म !! पुरुषको पेटमा ४ महिनाको गर्भ, सन्तान जन्माउने तयारी
Nextभर्खरै भूकम्प गयो : दोलखा केन्द्रविन्दु
भर्खरै आयो यस्तो खबर : पुस २० गतेसम्म बन्द !
जव रेस्टुरेन्टमा खान गएका ग्रहाकले वेटरलाई कार टिप्स दिएपछि…